တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မေတ္တာအခါတော်နေ့ ...
Posted by မေဓာဝီ at 5:50 AM
ပုံမှန်လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် မမေဓာဝီ။ ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲ ကင်းပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ၊ ချမ်းချမ်းသာသာ မိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင် ပါစေ။
8/28/2007 11:08 AM
8/29/2007 6:12 AM
Ma May.. Could you please post more articles about 'A Khar Daw Nae Myar' by Sayadaw Margadii (Thar-si).. it is very important but rare people know nowadays. Thanks for all.
8/30/2007 12:14 PM